I-Stonehaven Farm Farmstay - imvelo emnyango wakho - I-Airbnb
I-Stonehaven Farm Farmstay - imvelo emnyango wakho
North Bank, Marlborough, i-New Zealand
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Anna
Ikhishi elivuselelwe kabusha lango-1900 elibekwe osebeni lomfula i-Wairau, eliphakathi nendawo yamapulazi enamahlathi, iMt Richmond National park, iLake Chalice kanye nendawo yaseGoulter River ngaphakathi kwemizuzu engama-20 ukushayela. Ukudoba ama-trout, ukuhamba ngezinyawo nokuzingela kulezi zindawo noma usekhaya. Indawo ezungezile ebukekayo enemvelo emnyango. Ilungele noma yisiphi isivakashi esifuna ukuphuma emzileni oshayiwe bese sijabulela imvelo
Nakuba siyisikhungo samahhashi asebenzayo, ukugibela amahhashi akuyona inketho.
I-Stonehaven Farm ingahlela uhambo lokuzingela indiza enophephela emhlane, ukudoba okuqondisiwe kwe-trout. Hamba phansi uye emgodini wethu wokubhukuda osebeni lomfula i-Wairau. Ngaphandle kwalokho wamukelekile ukuthi uhlale nje, ucwiliswe emkhathini futhi uhlole igceke lethu elingemuva elimangalisayo. Ama-tramp epaki kazwelonke i-Mt Richmond kanye nokunye okuhamba ngezinyawo kosuku lwasendaweni phakathi nemizuzu eyi-15 ushayela noma uye e-Marlborough imisindo, nambitha amawayini amaningi azuze imiklomelo yaseMarlborough noma isampula yentokozo emnandi yasendaweni phakathi nohambo lwamahora okushayela.
Indlwana yethu yakudala yomndeni ingeminyaka yawo-1900's, iphakathi kwepulazi lethu elikwazi ukufinyelela kulo ngasese, impilo yethu yansuku zonke yasepulazini iyaqhubeka eduze kwakho ngakho kuzosetshenzwa izingane, izinja, izingulube namahhashi enkundleni ngaphandle kwekotishi.
Ikotishi lashintshwa ngoSepthemba 2018, sazilungisa ngokwethu futhi sisenezinto ezimbalwa okufanele sizenze okungukuthi izingadi, i-flooring njll uma isikhathi sivuma. Yindala - ikotishi ngokwalo selishintshile izikhathi ezingu-3 ngesikhathi sokuphila kwalo kodwa linamathambo amadala futhi bekufanele lilondolozelwe izivakashi ukuze silijabulele njengoba senzile kule minyaka engu-12 edlule.
I-Stonehaven Farm cottage ilungele labo abafuna ukuzwa indawo ezungezile enokuthula nokuthula. Sizama ukuhlalisa yonke into ekhishini futhi sinikeze ubisi namaqanda uma sikwazi. Kepha sicela uqaphele ukuthi idolobha eliseduze (Renwick) lihamba ngehora le-3/4. Sinamandla elanga aphelele, i-inthanethi iyi-satilette ngakho ukulanda kungahamba kancane noma kuphazamise ezinsukwini zesimo sezulu esibi - okufanayo neFreeview ku-TV. Amanzi aphuma emthonjeni wamanzi ahlanzekile. Kunezilwane ezizungezile futhi ngeshwa angikwazi ukumisa izicabucabu, izinyoni nezinye izilwane ezizungezile ezenza izindlu zazo ngaphandle kwendlu yethu!
Siyakuthanda lapha, futhi izihambeli eziningi zijabulela indawo ezungezile, ukuzola nokuhluka kwendawo yethu yasemapulazini.
I-HDTV engu-50" ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Netflix
I-Stonehaven farm 1900's Cottage esithuthelwe izikhathi eziningi empilweni yalo, leli kotishi litholakala eduze kwethrekhi eshayiwe, lingaphandle kwegridi futhi lisebenza ngamandla elanga. Imvelo ingumakhelwane oseduze kakhulu futhi indawo yokuwina iwayini esezingeni lomhlaba yaseMarlborough, amathilomu nemisindo iyihora elihle uma uhamba ngemoto.
Ipulazi i-Stonehaven lihlala esizeni futhi lizoba khona ukuze likusize nganoma yimiphi imibuzo noma ulwazi oludingayo.